Thursday December 18, 2014 - 02:14:24 in Wararka by Super Admin
Haddaba maamulada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa noqday maamuladii ugu horeeyay ee dacwada gaarsiiyay dhul miyi ah oo magaalooyinka aad uga fog.
Meesha wadaado badan ay door bideen iney dibadaha iyo mgaalooyinka dhaldhalaalaya uun ku koobnaadaan ayey Xarkada Mujaahidiinta Al-Shabaab ducaad ku baahisay dhul aaney wali si rasmi ah dacwada u gaarin.
Ducaad ayaa geed iyo goof walba dacwada ugu geeyay dadka reer miyiga ah kuwaasoo in badan oo kamid ah la baray diinta islaamka gaar ahaan towxiidka iyo wax yaabaha buriya.
Maalintii shalay waxaa tuulo hoos timaada Jubooyinka lagu qabtay tartan diini ah oo u dhaxeeyay dad reer miyi ah oo maalmo wax la barayay. Mid kamid ah tartamayaasha oo 30 jir ah ayaa waxaa wareysi uu bixiyay laga dheehanayaa sida xawaaraha leh ee ay dacwadu u fideyso.
dhageyso: Xalqada 13 aad dhulalka laboobay ee Muslimiinta sidee loo qabsaday dhulka Araakaan?